Budata Airbus A380-800 VC Air France FSX & P3D - Freeware
Emelitere na 05 / 05 / 2013: Fixes VC chinchi na-agbakwunye a 2D panel kere Rikoooo.
Airbus A380 Air France na agba, ọ zuru oke! Na-agụnye kokpiiti amị mebere dabere na ezigbo A380 na ụda omenala, mkpọ a na-ejikwa iko opaque (windshield) na redio. A na-agbanye ụlọ ụlọ klas nke mbụ (ala nke abụọ). Rịba ama na iko windshield nwere ike ịghọ opaque ma ọ bụrụ na ịnọ na mmiri (naanị FSX SP2 na P3D). Na 2012 Air France nwere ụgbọ elu asatọ asatọ dị otú ahụ nwere oche 538 nke ọ bụla nwere ngwongwo "Alliance GP 7200."
The Airbus A380 bụ nnọọ obodo airliner widebody ogologo osisi anọ engine abụọ-decker emepụta site Airbus, ihe EADS enyemaka. Ya ọcha na-wuru tumadi na France, Germany, Spain, na United Alaeze, ndị ikpeazụ nzukọ na-eme na Toulouse, France.
The A380 omume, a ngụkọta mmepe na-eri nke 12 ijeri euro, na oru ke ufọt ufọt 1990 dị ka Airbus A3XX. The mbụ ụgbọ elu ahụ weere ọnọdụ 27 April 2005 na Toulouse ọdụ na mbụ azụmahịa ọrụ ẹkenịmde October 25, 2007 site Singapore Airlines n'etiti Singapore na Sydney.
The A380 bụ, na 2012, ndị kasị ibu obodo ụgbọ elu ke njem ọrụ, na nke atọ kasị ukwuu ugbo elu na akụkọ ihe mere eme nke ụgbọelu, mgbe Hughes H-4 Hercules na Antonov An-225. The A380 si elu oche gbatịrị tinyere dum ogologo nke fuselage, na-enye ụlọ ebe 50% karịrị ya kpọmkwem onye osompi, nke Boeing 747-400. (Wikipedia)
Ogwe 2D ọhụrụ nke Rikoooo + mepụtara ma na-emegharị VC maka FSX na Prepar3D
Gụnyere HUD na VC na 2D Panel, textures abalị, akara ngosi panel na ụfọdụ omenala gauges ...
The 2D panel bụ tupu-arụnyere na-gụnyere ke a mkpọ. Otú ọ dị, ị nwere ike ibudata ya iche iche: Download 2D Panel (gbazie VC) - 8MB pa_a380_2dpanel_rik_fsx.zip
downloads 328 897
kere 29 Aug 2012
emelitere 19 Apr 2017
Project Airbus, repack na 2D Panel site Rikoooo, VC mgbazi sitere n'ike mmụọ nsọ Facked